Xildhibaan Khaalid Macow oo sheegay in ay wadaan kullamo wada-tashi ah oo is-daba-joog ah – Kalfadhi
Xildhibaan Khaalid Macow oo sheegay in ay wadaan kullamo wada-tashi ah oo is-daba-joog ah
Guddiga KMG ah ee diyaarinta Sharciga doorashooyinka dalka oo safar ku jooga Magalada baydhabo ee Xarunta gobolka Baay, ayaa maanta kulan la qaateen Bulshada Rayidka ah ee Konfur Galbeed iyo Xildhibaannada Maamulkaas.
Kulanka ayaa wax uu ahaa mid ugaar ah Guddiga KMG ah ee Diyaarinta Sharciga Doorashooyinka iyo Bulshada rayidka ah. Xildhibaan Khaalid Macow, oo lahadlay Kalfadhi ayaa sheegay, in kullanka uu ahaa mid ay ku kala war-qaadanayeen Guddiga iyo qaybaha kala duwan ee Bulshada Koonfur-Galbeed,.
Xildhibaan Khaalid Macon ayaa sheegay in Guddiga KMG ah ee Sharciga doorashooyinka ay wadaan kulamo is daba joog ah oo ku saabsan sharciga Doorashooyinka.
“Waxaan la kulanay Madaxda Sare ee dalka iyo qaybaha Bulshada si aan uga wada hadalno arrimaha sharciga Doorashooyinka” ayuu kalfadhi ku yiri Xildhibaan Khaalid Macow.
Guddiga KMG ah ee diyaarinta Sharciga doorashooyinka dalka oo safar ku jooga Magalada Baydhabo ee Xarunta gobolka Baay, ayaa waxaa ay horay ula kulmeen Madaxweynaha Maamulka Koonfur Galbeed iyo Xildhibaannada Maamulkaas.
Guddiga KMG ah ee diyaarinta Sharciga doorashooyinka dalka, ayaa looga baahan yahay in ay ka shaqeeyaan sharciga Doorashooyinka Qaranka ee dhawaan ay Meelmariyeen Golaha wasiiradda Xukumadda Federaalka ah ee Soomaaliya.
Guddoomiye ku xigeenka Aqalka Sare oo ka hadlay shirka magaalada Hobyo
Xildhibaanno iyo Sanataro ka tirsan baarlamaanka oo ka qeyb galaya shirka Hobyo